Maxaad u Baahan Tahay Haddii Bootaa Infected Kumbuyuutarkaaga? - Khabiirka Cilmi-baarista ayaa bixiya jawaabta
Bootaalayaasha ayaa sidoo kale loo yaqaannaa shabakadaha robotyada. Xaqiiqdii waa shabakad ballaaran oo kombiyuutar iyo qalab mobile ah oo ay qaadaan virus ama virus. Xakameyaashu waxay xakamaynayaan nacasnimadan waxayna u muuqdaan inay qabtaan hawlo kala duwan. Kiisaskaas ama spammers waxaa badanaa loo tixgeliyaa sidii xoolo caruur ah. Mashiinka cudurka qaba waxaa koontaroolaya oo u shaqeynaya barta gaar ah, qofka weerarku wuxuu amar ku siiyaa kombiyuutarrada botnets iyo wuxuu qabanayaa falal dambiyeed isku-dubaridan
Tirada baaskiiladu waxay u sahlaysaa kuwa weerarka qaaday in ay fuliyaan tallaabooyin waaweyn oo yar iyo kuwo yaryar kuwaas oo aan macquul aheyn in ay la shaqeeyaan nacabka caadiga ah ama fayraska - les outil de gestion du temps. Iyadoo botnets ay gacanta ku hayso kuwa weerarka ka fog, mashiinnada cudurka qaba waxay si joogto ah u helayaan cusbooneysiin waxayna isbeddelaan dabeecadooda. Natiijada, berrito ayaa si sahlan u kireeya kireystayaasha iyo dembiilayaasha intarneedka oo ay u kala qaybiyaan botnets qaybood si ay u fuliyaan hawlo badan, taas oo loola jeedo in ay siiyaan lacago badan oo dhaqaale.
Ficilada ama awoodaha ugu badan ee botnets waxaa hoos ku xusan Michael Brown, oo ah Semt Maareeyaha Guusha ee Macaamilka:
1. Emailka spam
Markaad hesho farriimo badan maalin kasta, fursadaha waa in emailkaaga emailka uu ku jiro weerarka kermaawe. Boorsooyinka isbaarada ah ayaa ku jira baaxad weyn waxaana loo isticmaalaa inay soo diraan farriimaha spam oo ay ka mid yihiin kuwa khayaanada leh. Waxay badanaa iska diidaan lambarrada khadka internetka. Tusaale ahaan, botnet Cutwail waxay u diri kartaa in ka badan toddobaatan bilyan oo farriin ah maalin kasta. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in lagu faafiyo fayruusyada iyo qoryaha iyo in ay qoraan kombiyuutarro badan oo kombuyuutar ah..
2. Weerarada DDoS
Weerarrada DDoS waxay isticmaalaan qiyaasta ballaadhan ee botnets waxayna kordhinayaan shabakada bartilmaameedka ama server oo leh codsi gaar ah. Waxay kaloo sameeyaan bartilmaameedkooda 'kumbiyuutarrada', bartilmaameedkoodu waa ururrada waaweyn, xisbiyada siyaasadeed, iyo shirkadaha soo dejinta dhoofinta. Waxay ujoogaan inay joojiyaan weerarrada helitaanka dhaqaale
3. Jebinta Maaliyadeed
Jebinta maaliyadeed waxaa ka mid ah botnets oo loogu talagalay kharashka tooska ah ee lacagaha laga helo shirkadaha waaweyn. Waxay sidoo kale xadaan macluumaadka kaararka deynta iyo furaha PayPal. Boorsooyinka Maaliyadeed, sida Zeus botnet, waxay masuul ka yihiin weeraro ballaaran oo ku lug leh lacago farabadan oo laga soo xaday shirkado badan oo waqti gaaban ah
4. Qalalaasaha la beegsado
Kuwani waa baaskiilado yar yar oo ka kooban qadar dhaadheer oo u muuqda in ay wax u dhimayaan kombiyuutar gaar ah. Weeraryahannadu waxay u soo diraan qoryo ururro u sahlan in ay dhex galaan oo ay qalqal geliyaan shabakado faafa. Ka-hortagga khatarta waa khatar ah marka ay weeraro ururada waaweyn iyo inay xadaan xogta dhaqaale, hantida garashada, iyo macluumaadka macaamiisha.
Waa ammaan in la yiraahdo botnets waa la abuuray marka khabiir uu u soo diro nidaamka xakamaynta / nidaamka xakamaynta ama adeeg gaar ah oo aan aqoon u lahayn isticmaale. Boorsooyinka ayaa si dhaqso ah u qaadsiiya mashiinno tiro badan. Marka aad furto faylasha xaasidnimo, qatartu waxay ku soo wargelinayaan boorsada si ay u ogaadaan in qalab kombuyuutar cusub uu diyaar u yahay in la weeraro. Qaar ka mid ah sifooyinka gaar ahaaneed ee botnets iyo koofiyadaha ayaa u dhigma iyaga oo ku habboon mudnaanshaha muddada dheer.